6-da aaladaha Automation-ka ee ugu Wanaagsan ee Instgram ka kaa caawin doona Kobcinta Ka-qaybgalka 2022
6-da aaladaha Automation-ka ee ugu Wanaagsan ee Instgram ka si ay kaaga caawiyaan kobcinta ka-qaybgalka
Waxaa laga yaabaa 5, 2022 SAN
Ma ku fikirtay inaad isticmaasho qalab iswada, laakiin ma go'aamin kartaa kuwa badan oo kala duwan ee diyaar u ah inaad doorato? Ma rabtaa inaad ogaato aaladaha iswada ee Instagram kuwa ugu fiican iyo kuwa ay tahay inaad tijaabiso?
Instragram waa mid ka mid ah aaladaha warbaahinta bulshada ee ugu caansan, gaar ahaan marka ay timaado suuq-geynta warbaahinta bulshada iyo in la gaaro daawadayaal badan. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid dhib badan in la isku dayo oo la sii joogo dusha sare.
Aaladaha otomaatiga ah ee Instagram ayaa kaa caawin doona wax walba laga bilaabo dhajinta ilaa ka-qaybgalka iyo wax ka badan. Haddii aad rabto inaad ogaato kuwa ugu fiican Qalabka otomaatiga ee Instagram, akhri.
Bulsho ahaan raadso
Wax qarsoodi ah maaha in aaladaha otomaatiga ah ee Instagram ay noloshaada ka dhigi karaan mid aad u fudud marka ay timaado kobcinta akoonkaaga Instagram iyo gaaritaanka dadka badankiisa gaar ahaan haddii aad u isticmaaleyso Instagram aalad suuqgeyn ganacsi ah. Waxaa jira qalabyo badan oo kala duwan oo otomaatig ah oo Instagram ah laakiin halkan waxaa ah qaar ka mid ah kuwa ugu caansan.
Marka hore liiskayaga waxaan ku haynaa AgoraPulse. Kani waxa la sheegay in uu yahay barnaamij maamul bulsho oo dhamaystiran kaas oo kaa caawin doona in aad 2 u maamusho akoonnada warbaahinta bulshada siyaabo kala duwan oo kala duwan.
App-kan waxa aad hore ugu dhejin kartaa qoraalada Instagram oo aad jadwal u sameysan kartaa in la soo dhejiyo, bulk geliyaan qoraalada miiska ama kombayutarka, jadwal qoraalada sheekooyinka, iyo xitaa caawimo ka heli kartaa marka ay timaado magaca isticmaale iyo hashtags. Waxaa jira baakado kala duwan oo mid ka dooran karo kuwa leh miisaaniyado kala duwan, laakiin waxay ka bilaabaan $ 79 bishii.
Aaladda soo socota ee otomatiga Instagram ee aan eegi doono waa Duuliyaha Bulshada. Tani waxaa la sheegay in ilaa hadda ay tahay mid ka mid ah aaladaha iswada ee Instagram-ka ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa maanta waxaana loo isticmaali karaa in lagu maamulo labadaba Instagram-kaaga iyo akoonnada kale ee warbaahinta bulshada.
Mid ka mid ah qaybaha ugu fiican ee ku saabsan Duuliyaha Bulshada ayaa ah inay kaa caawin karto maareynta ilaa 100 akoonnada warbaahinta bulshada oo kala duwan. Waxay kaa caawinaysaa wax walba laga bilaabo jadwalka qoraalada lagu falanqeynayo waxqabadkaaga nuxurka, maaraynta socodka shaqada, iyo xitaa abaabulka jadwalka macluumaadkaaga bulshada.
Qalabkan otomaatiga ah aad ayuu uga jaban yahay kan kore oo ka bilaabma $25 bishii wuxuuna socdaa ilaa $83 bishii.
Hoos u dhigista liiskayaga qalab kale oo weyn oo otomaatig ah oo ay tahay inaad tixgeliso isticmaalka waa Kicksta. Kicksta ayaa la sheegay inay tahay mid ka mid ah aaladaha otomatiga ugu wanaagsan ee Instagram marka aad diiradda saarayso kobaca akoonkaaga oo aad rabto inaad hesho taageerayaal badan oo aad kordhiso ka qaybgalkaaga.
Xaqiiqdi maaha inay ku siiso kordhinta dammaanadda ee taageerayaasha waxay kaa caawinaysaa inaad la falgasho xisaabaadka dhabta ah ee ka mid ah dhageystayaasha bartilmaameedka ah iyo qayb ka mid ah niche kaa caawin doona inaad si caadi ah u koraan akoonkaaga.
Qalabkan, waxaad kala dooran kartaa laba qorshe oo qiimo jaban haddii aad rabto qorshaha caadiga ah ee $49 bishii ama qorshaha qaddarka ee $99 bishii.
Markaa qalabka soo socda ee otomaatiga ah ee aan ku hayno liiskayaga waa Later. Tani waa mid ka mid ah aaladaha ugu caansan Instagram sababtoo ah inta ay le'eg tahay shaqeynta ay leedahay iyo tirada waxyaabaha ay tahay inay bixiso.
Ka dib waxay bixisaa wax kasta oo ka socda cilmi-baarista macluumaadka ee hashtags iyo ereyada muhiimka ah, habeynta kalandarka macluumaadkaaga, horay u gelinta macluumaadka si loo qorsheeyo in la dhejiyo, iyo xitaa samaynta falanqaynta koontadaada si loo horumariyo.
Ku soo dhawaada dhamaadka liiskayaga aaladda xigta ee aan eegi doono waa raadinta bulsho ahaan. Haddii aad la halgamayso kobacaada iyo ka qayb qaadashadaada oo runtii aan u baahanahay xoogaa caawimaad ah tan, markaa raadso bulsho ahaan waa aaladda ugu fiican ee tan.
Raadinta bulsho ahaan kaliya maahan Instagram oo keliya laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xisaabaadka kale ee warbaahinta bulshada. Mid ka mid ah qaybaha ugu fiican ee ku saabsan qalabkan otomaatiga ah ayaa ah in si aad ah loo qiimeeyo laga bilaabo $44 bishii.
Ugu dambayntii laakiin hubaal ugu yaraan waxaanu haysanaa Jarvee, kaas oo ah aaladda toosinta ugu fiican haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo ka qayb qaadashadaada sida raacida dib-u-dhigista jecel, iyo wadaaga macluumaadka isticmaalayaasha kale. Qalabkani wuxuu sidoo kale kaa caawin doonaa inaad sameyso cilmi-baaris hashtag ah si aad u heshid hashtagyada ugu fiican ee nuxurkaaga, jadwal u samee qoraallada meelo kala duwan oo kala duwan, iyo xitaa raadso sawirro Instagram tayo sare leh oo NP si otomaatig ah ugu lug leh.
Qalabkan otomaatiga ah waxa uu leeyahay saddex qorshe oo kala duwan oo qiimeed kuwaas oo ka bilaabma $29 bishii oo kor u kaca ilaa $69 bishii.
Siyaabaha Ugu Wanaagsan ee Loo Kordhiyo Muusiga Baraha Bulshada
Talooyinka Ugu Wanaagsan Ee Loo Adeegsanayo Warbaahinta Bulshada Waxbarashada Kuleejka
Previous Post:Shahaadada Bachelor-ka ee 12 bilood gudahooda- Dugsiyo iyo Barnaamij
Post Next:5-ta Jaamacadood ee Ingiriisiga ugu sarreeya ee Faransiiska